Wararka - DuckerFrontier: Waxyaabaha aluminiumka otomaatigga ah si ay u koraan 12% illaa 2026, filo xirnaansho badan, gadaal
Daraasad cusub oo ay soo saartay DuckerFrontier oo loogu talagalay Ururka Aluminium waxay ku qiyaaseysaa baabuurta sameeyayaasha inay ku dari doonaan 514 rodol oo aluminium ah celcelis ahaan gaariga marka la gaaro 2026, waana boqolkiiba 12 koror maanta.
Ballaarinta ayaa leh cilado muhiim ah oo ku saabsan dayactirka isku dhaca, maadaama dhowr qaybood oo jirka ka mid ah oo caadi ah la saadaalinayo inay isbeddel weyn ku sameeyaan aluminium.
Marka la gaaro 2026, waxay noqon doontaa mid hubaal ah in daboolku yahay aluminium, oo ku dhow xitaa lacag uu yahay wiishka ama daboolka uu noqon doono, sida laga soo xigtay DuckerFrontier. Waxaad haysataa fursad 1-in-3 ah oo daaqad kasta ama albaab kasta oo iibiya gawaarida cusub ay noqon doonaan aluminium.
Taasina xitaa ma gasho isbeddello ku yimaada qaybaha qaabdhismeedka loogu talagalay in lagu soo saaro waxtarka weyn ee gaaska ku shaqeeya gaaska ama lagu maareeyo baytariyada moodooyinka korantada ku shaqeeya.
Maaddaama cadaadiska macaamiisha iyo caqabadaha deegaanka ay kordhayaan - sidoo kale isticmaalka aluminiumta baabuurta. Baahidaan ayaa sii kordheysa maadaama kaarboon hooseysa, aluminium awood sare leh ay ka caawineyso gawaarida si ay ula qabsadaan isbeddelada cusub ee dhaqdhaqaaqa, waxaanan ku qanacsanahay kobaca biraha ee qaybta baabuurta korantada ee dhakhsaha u soo baxda, "Gudoomiyaha Kooxda Aluminium ee Gaadiidka Ganesh Panneer Novelis) ayaa ku yiri bayaan ay soo saartay Aug. 12. Maaddaama gawaarida korontada si ballaaran loo heli karo, aluminiumku wuxuu u adeegsadaa inuu ballaadhiyo kala duwanaanta isla markaana ka caawiyo miisaanka batteriga iyo qiimaha ayaa hubin doona in macaamiisha ay wali awoodi doonaan inay doortaan gawaarida waxqabadka sare leh iyo gawaarida xasiloon ee badbaadada leh, raaxeysiga wadista iyo si ka wanaagsan ilaalinta deegaanka . ”
DuckerFrontier wuxuu yiri celceliska gaariga sanadka 2020 waa inuu lahaadaa qiyaastii 459 rodol oo aluminium ah, "gaariga sababo la xiriira kororka isticmaalka aaladda jirka, (ABS), iyo aluminium tuurista iyo qashin-saarka, iyadoo kharashka laga qaadayo fasalada caadiga ah ee birta."
Naxdinta Rubber Rubber, Hood Shooga Nuugista, Wadajirka Kubadda Tire, Jabinta Steering Front, Naxdinta Nuugista Bolt, Gawaarida Hub,